Madaxweyne Gaas iyo Jaamacadda Maakhir | allsanaag
Madaxweyne Gaas iyo Jaamacadda Maakhir
Hoos ka akhriso fariin ka timid madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas
Waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland ee qiimaha badan ugu bishaaraynayaa in maanta inoo rumowday mid ka mid ah hiigsigeenii dhisida Kaabayaasha Dhaqaalaha.
Dadaal dheer oo aan u galnay ka mira dhalinta dhismaha Jaamacada Maakhir ee Puntland, waxaa si guul ah inoogu soo gaba gaboobay wajigii koowaad ee dhismaha Maakhir University oo loo dhisay qaab caalami ah. Dowladda waxay dadaal dheer u gashay hamsami socodka iyo musuq ka illaalinta mashruucan si uu u noqdo mid guul kusoo dhamaada.
Jaamacadda Maakhir oo loo dhisay hab casri ah ayaa ka mid noqon doonta Jaamacadaha uga waa wayn bariga Afrika, waxaana rajaynayaa in qayb wayn oo lixaad leh ay ka qaadan doonto haqab tirka baahida waxbarasho ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaana Puntland.
Ugu danbayn, waxaan shacabka qiimaha badan ee Puntland ugu baaqayaa inay dhexda u xirtaan dib udhiska dalkooda ayna ka fogaadaan waxkasta oo dhaawici kara horumarka dalka ka socda sidoo kalena ka fogaadaan dacaayadaha raqiiska ah ee inta samaha neceb.
Farxiya Cabdulqaadir Msha allh waa wax lugu farxo
Mudane sii wad horumarka…See More
Sawirada uu madaxweyne Gaas ku daray qoraalkiisa waa kuwa aad hoos ka daalacan doonto
Halkani waa BADHAN, Sanaag, Puntland
← Xildhibaan Feedh wejiga looga bedelay Aqoonsiga SNM meel walba laga raadi →